Mingalarbar - Home
သမ္မတဦးဝင်းမြင့် နိုင်ငံငါးခုမှ သံအမတ်ကြီးများ၏ ခန့်အပ်လွှာကို လက်ခံ
အထက်တန်းပညာရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်များသည် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
CCCC က ရေးဆွဲမည့် ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းအကြို အဆိုပြုလွှာ
Jr. IT Technician-(2) Posts
Sales Assistant (0r) Delivery Man-(3) Posts
Onboarding Specialist-(3) Posts
ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်ထွက်ဆိုမှု ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး လွတ်မြောက်ရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ဟု ရှေ့နေပြော
ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ဥပဒေ ထက်ကျော်လွန်သော အမိန့်၊ ညွှန် ကြားချက်များရှိနေကြောင်း ဖမ်း ဆီးခံထားရသည့် ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်က တရားခွင်မှ အထွက် တွင်ပြောကြားသည်။
၎င်းကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် အ ခြေအနေနှင့် ရိုက်တာသတင်း ထောက်များအား ထောင်ဖမ်းသည့် ဖြစ်ရပ်များတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဥပဒေ ကို ကျော်လွန်သည့် အမိန့်များ ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်က ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များ အက်ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထား ရသော ရိုက်တာသတင်းထောက် နှစ်ဦးကို မေလ ၉ ရက်တွင် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်စစ် ဆေးပြီး တရားလိုပြသက်သေ အဖြစ် ဒုရဲမှူးဟောင်းမိုးရန်နိုင်ကို စစ်ဆေးသည်။
ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်သည် အထက်အမိန့်မပါရှိဘဲ သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံသတင်းပေး၍ဆိုကာ ရဲစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေဖြင့် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်ချမှတ်ခံရပြီး ယခုရုံးချိန်းတွင် အကျဉ်းသား ၀တ်စုံဝတ်၍ သံခြေချင်းခတ် အနေအထားဖြင့် သက်သေ လာရောက်ထွက်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
Read more: ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်ထွက်ဆိုမှု ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦး လွတ်မြောက်ရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ဟု...
Read more: ကျောက်ဆည်မြို့က ပိုင်ရှင်မဲ့သစ် အမှု ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးနေ
မန်ဝိုင်းက စစ်ရှောင်တွေကို ခေါ်ထုတ်လို့ မရသေး
အိုးအိမ်စွန့် ထွက်ပြေး ခဲ့ရပြီး ဘယ်မှ ထွက်လို့ မရကြဘဲ ပိတ်မိနေကြတဲ့ ကချင် စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်ထုတ်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းကြတဲ့ ကချင်လူငယ်အဖွဲ့ကို တပ်မတော် ဘက်က တားဆီး ထားလို့ ညှိနှိုင်း နေတယ်လို့ လူငယ်အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
မေလ ၃ ရက် နေ့ညပိုင်း အထိ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီး နောက် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ လူ ၅၀ ကျော် အဖွဲ့နဲ့ အတူ အဲဒီ လူငယ်တွေက ကာမိုင်းမြို့နယ် မန်ဝိုင်း ကျေးရွာက စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ မေလ ၄ ရက်နေ့ မနက်က သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Read more: မန်ဝိုင်းက စစ်ရှောင်တွေကို ခေါ်ထုတ်လို့ မရသေး
သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထံ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဂျပန်၊ မလေးရှားနှင့် မာရှယ်ကျွန်း စုနိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ က ၎င်းတို့၏ခန့်အပ်လွှာကို ယမန်နေ့တွင်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသမ္မတရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ဦးဝင်းမြင့်သည် သမ္မတရာ ထူးတာဝန်လက်ခံပြီးနောက် ပထ မဆုံးအကြိမ် သမ္မတစလွယ်ဝတ် ဆင်၍ သံအမတ်ကြီးများ၏ ခန့် အပ်လွှာကို လက်ခံခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် မြန် မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှားသံ အမတ်ကြီး ဒေါက်တာအီဇာဖာဒ ရီ၏ သံအမတ်ခန့် အပ်လွှာကို ယမန်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် လည်းကောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံ အမတ်ကြီး မစ္စတာ မန်ဂျရူလ်က ရင်ခမ်ချောင်ဒရီ၏ ခန့်အပ်လွှာ ကို ယမန့်နေ့နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ တွင်လည်းကောင်း၊ဂျပန်သံအ မတ်ကြီး မစ္စတာအိချိရော့မာရု ယာမ၏ ခန့်အပ်လွှာကို ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁နာရီတွင်လည်းကောင်း လက်ခံခဲ့သည်။
Read more: သမ္မတဦးဝင်းမြင့် နိုင်ငံငါးခုမှ သံအမတ်ကြီးများ၏ ခန့်အပ်လွှာကို လက်ခံ
အီရန်က အစ္စရေးအား ဒုံးကျည် အစင်း ၂ဝ ကျော် ပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်
ဂျေရုစလင် ၊ မေ ၁ဝ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဆီးရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် တပ်စွဲထားသော အီရန်တပ်ဖွဲ့ ဝင်များက အစ္စရေးနိုင်ငံအား မေလ ၉ ရက်တွင် ညလုံးပေါက် ဒုံးကျည် အစင်း ၂ဝ ကျော်ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ဒုံးကျည်အချို့ ကို အစ္စရေးဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေးစနစ်က ကြားဖြတ်ဟန့် တားနိုင်ခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးစစ်တပ်က ဆိုသည်။
တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အစ္စရေးဘက်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိကြောင်း အစ္စရေးနိုင်ငံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ (IDF) ၏ မေလ ၉ ရက် ညပိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
IDF ကာကွယ်ရေးစနစ်က ဂိုလန်ကုန်းမြင့်တွင် တပ်စွဲထားသည့် အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ အားဦးတည်၍ အီရန် Quds တပ်ဖွဲ့ က ခန့် မှန်းခြေ ဒုံးကျည် အစင်း ၂ဝ ပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း အစ္စရေးစစ်တပ်က ဆိုသည်။
Read more: အီရန်က အစ္စရေးအား ဒုံးကျည် အစင်း ၂ဝ ကျော် ပစ်လွှတ်တိုက်ခိုက်
ကုန်တင်၊ကုန်ချစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရန် Asia World ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်တင်၊ကုန်ချစက် ၁၄ ခုတပ်ဆင်
Written by ထွန်းထွန်းမင်း ( 7Day Daily)
ပြည်ပ သွင်းကုန်၊ပို့ကုန်များအ တွက် Asia World ဆိပ်ကမ်း၏ ကုန်တင်၊ကုန်ချစွမ်းဆောင်ရည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တိုးမြှင့်ရန် ကုန်တင်၊ကုန်ချပြုလုပ်သည့် စက် ၁၄ ခုတပ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း Asia WorldPort Management ကုမ္ပဏီကဧပြီ ၂၉ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
Asia World ဆိပ်ကမ်းသည် ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကွန်တိန် နာများကို အတင်အချပြုနိုင်သည့် ပြည်တွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်း ငါးခုအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ တွင် ဈေးကွက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ လာမည့်နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း ကွန်တိန်နာတင်ချလုပ် ငန်း တွင်ကျယ်လာမည်ဖြစ်သော ကြောင့်ဟု ကုမ္ပဏီကဆိုသည်။
Read more: ကုန်တင်၊ကုန်ချစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရန် Asia World ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်တင်၊ကုန်ချစက် ၁၄ ခုတပ်ဆင်
အလုပ်ခေါ်စာများကို Mingalarbar ၏ For Employer ကဏ္ဍ တွင် ကိုယ်တိုင် တင်နိုင်ပါသည်။
Mingalarbar တွင် အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် အလုပ်ခေါ်စာကြော်ငြာများကို မိမိစိတ်ကြိုက် အခမဲ့တင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်ခေါ်စာတစ်ခုတွင် Job Title, Organisation Name, Job Location, No. of Position, Closing Date စသည့် အချက်အလက်များပါ ရှိရပါမည်။ နောက်ဆုံးတွင် မိမိတို့ ထပ်မံထည့်ချင်သော အချက်အလက်များကို Word File (သို့မဟုတ်) Pdf file ဖြင့် attach လုပ်နိုင်ပါသည်။
MMITSG Sale & Services
အတိုးနှုန်းတွေ လျှော့ချ ပြောင်းလဲ လိုက်တဲ့ KBZ ဘဏ်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်နှင့်အခြားအာဟာရဓာတ်များ ကြွယ်ဝ စွာပါဝင်သော ရုံးပတီသီးတွင် ဆီးချိုရောဂါကိုကုသနိုင်ခြ...
တိုက်စစ်မှူးနေမာ ပီအက်စ်ဂျီသို့ ယနေ့ (သို့မဟုတ်) မနက်ဖြန်ရောက်မည်ဟု နည်းပြအတည်ပြုပီအက်စ်ဂျီနည်းပြအမ်...
ပြည်ပ သွင်းကုန်၊ပို့ကုန်များအ တွက် Asia World ဆိပ်ကမ်း၏ ကုန်တင်၊ကုန်ချစွမ်းဆောင်ရည် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းေ...
အာဖရိကတိုက် ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံမှာ ဘီဘီစီနဲ့ ဗီအိုအေအသံလွှင့်ဌာနတွေကို အစိုးရက ခြောက်လ ပိတ်လိုက် ပါတယ်။ ...
၂၂ နှစ်တာ ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်နည်းပြ အာဆင် ဝင်းဂါးက အချိန်ကျပြီလို့ ခံစားမိတဲ့အတွက် လက်ရှိ ဘောလု...
ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်က ကြည့်ရင် လူတယောက်အတွက် အိပ်စက်ချိန် ပြည့်ပြည့်၀၀ ရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အရင်ကတေ...
NLD အစိုးရ လက်ထက်အတွင်း ကာလ အတော်ကြာ တည်ငြိမ်နေသော အမေရိကန် ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်းဈေးမှာ ယခု လပိုင်း အတွင...
မင်္ဂလာပါ Facebook Fan Page